Chii chandinoita newiricheya yangu yandakamboshandisa kana ndisisichadi?
Posted on July 26, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Kana iwe uchitsvaga yakangwara uye yakapusa nzira yekubvisa yako yawakashandisa wiricheya, peji ino inopa ruzivo zvine chekuita nemabatiro aunogona kutengesa cheya yako yawakashandisa cheya nekureruka.
Tenga Demo Chairs
Ndoita sei neyangu wiricheya apo ini ndisisichadi?
Ndiwo mubvunzo vanhu vazhinji vakaremara vanozvibvunza pavanoona kuti havachadi yavo wiricheya. hwiricheya vashandisi dzimwe nguva vanofunga kuti havadi kana kuda yavo wiricheya zvekare uye vanozviwana zvakaoma kubvisa iyo midziyo, kana kuitengesa neimwe nzira yekudzoka pane yavo mari.
Kune vamwe zvakare vashandisi vane yakaderera mari mamiriro ayo inoda ivo kutenga yakashandiswa wiricheya, apo izvi zvine njodzi huru, dzimwe nguva zviri padyo hazviiti kudzivirira kuve nekutenga yakashandiswa wiricheya. Dzimwe nguva unogona kutenga wiricheya kuburikidza Medicare kana Medicaid, iyo inobvisa njodzi yekutenga yakashandiswa wiricheya. Tichavhara zvese zvingasarudzwa pamambure kune vanhu vari kutsvaga kutenga kana kutengesa zvavaishandisa hwiricheya.
Kune akawanda masevhisi kunze uko ayo anotendera iwe kushambadzira uye kushambadza yako yawakashandisa wiricheya. Semuyenzaniso, craigslist.com inopa chikamu chekunyora uye kutengesa zvinhu zvako zvisingadiwe, vamwe vashandisi vanofarira kuposita pasi pe "Hutano uye Runako" chikamu, vamwe vashandisi vanoisa kushambadzira kwavo pasi pechikamu che "General Kutengesa". Zvichienderana nei mhando yemidziyo iwe yauri kuyedza kutengesa, unogona kushandisa yako wega kutonga pane chikamu icho chiri mune.
Ebay.com zvakare inopa sevhisi yakafanana iyo inokutendera iwe kushambadza uye kushambadzira ma ads ane hukama neako wiricheya kana kurapwa midziyo, nekuda kwebasa iri iwe kunodiwa kusaina uye upinde muakaunti yako kuti ukwanise kutumira yako yawakashandisa hwiricheya.
Imwe sarudzo yekutengesa kana kutenga yakamboshandiswa wiricheya iri Kuremara Foramu. Mawebhusaiti senge apparelyzed.com, iyo inobvumira vashandisi kutenga uye kutengesa zvakashandiswa mavhiripu kubva kunharaunda yavo yevashandisi vakavimbika uye vakazvipira.
ichi sarudzo inoda iwe kusaina uye upinde muaccount yako kwaunogona kutanga kutumira pasi pe "Akaremara Classifieds - Secondhand Mawiricheya - Ari Kutengeswa / Anodiwa”Chikamu, chinowanzo kuve nzvimbo kupi kuremara maforamu anoronga anoshandiswa mavhiripu zviri kutengeswa.
Zvese mune zvese, chiito chekutenga chakashandiswa wiricheya inomiririra mukana wakakura wekuti inogona kusashanda kana kuputsa, zvinoenderana nekusakara uye kubvaruka pane iyo wiricheya. Uyezve, kutenga yakashandiswa wiricheya zvinoreva zvakare kuti uri kutenga iyo pamutsago kana upholstery yemushandisi wapfuura, iyo inounganidza mabhakitiriya nekudikitira nekufamba kwenguva, izvo zvinogona kunge zvisina hutano paganda nemuviri wako.
(Tinotakura anti-bhakitiriya makushoni zviya)
Gara uine chokwadi chekuti iyo wiricheya urikutenga une ruzivo rwakawanda rwunouya pamwe chete narwo, chero kwaungatumirwa online, tsvaga mifananidzo, bvunza mibvunzo, ita shuwa kuti urikuwana iyo wiricheya iwe unoona mumifananidzo, uye kwete chimwe chinhu chakatyoka kana chisinga gadziriswe.
Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona kushanyira zvinotevera zviwanikwa zvinogona kukubatsira iwe kusarudza kana kutenga yakashandiswa hwiricheya izano rakanaka, kana kana iwe uchida kutenga hachizi itsva wiricheya yemawoko, kana wiricheya yemagetsi.
Nzvimbo dzekushanyira kuti utengese Yako Yakashandiswa hwiricheya
Vhura Bhokisi Rekurapa - Anoshandiswa Mawiricheya - Tenga kana Kutengesa
Secondhand Wiricheya Gwaro
Ebay - Tenga kana Tengesa Mawiricheya
1-800 wiricheya - Tenga Nyowani Manyore Mawiricheya & Akamira Mawiricheya
Los Angeles Volunteer Boka Vanotsigira Gore Negore "Wiricheya Wash" chiitiko
Wiricheya Wemuchato: Maitiro Ekuita kuti Muchato Wako Uwanikwe
Imwe pfungwa ya “Chii chandinoita newiricheya yangu yandakamboshandisa kana ndisisichadi?"
Pingback: Yakashandiswa Hoveround Craigslist - Detroit Metro Yekutengesa & Quot; Wiricheya, Simba Sachigaro & Quot; - Craigslist